अलपत्र मुडे–मेलुङ सडक पूरा गर्न गाउँपालिकाको ५० लाख - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
जेठ १५, २०७५ 1500 सागर केसी/दोलखा
ठेकेदारले काम नगरेपछि अघिल्लो हप्ता ठेक्का तोडिएको मुडे–मेलुङ सडक सुधार तथा स्तरोन्नती गर्न शैलुङ गाउँपालिकाले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बर्खामा पनि सडक सुचारु गर्ने गरी उक्त रकम छुट्ट्याइएको हो ।
सिन्धुपाल्चोकको मुडे बजारबाट दोलखाको मेलुङ जोड्ने सडकको ठेक्का तोडिएपछि अलपत्र थियो । काम सुचारु गरेर समयमै सडक पूरा गर्न बजेट छुट्ट्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतप्रसाद दुलालले बताए ।
डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटले निगाले बजारबाट १६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिकाे लक्षित सुधार नभएपछि ठेक्का तोडेको थियो । दुलालका अनुसार १६ किलोमिटर सडक एक महिनाभित्र पूरा गर्ने गरी ५ उपभोक्ता समिति बनाएर काम गरिनेछ ।
पानी परेको समयमा उक्त सडक खण्ड हिलाम्मे हुन्छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र शैलुङ नजिकका गाउँ विकास समितिको लगानीमा सडक खनिएको थियो । सडकमा २०५८ सालदेखि बस सञ्चालन हुँदै आए पनि केही वर्षयता जीर्ण बन्दै गएको छ ।
गाउँपालिकाले समेत उक्त सडक चाँडो पूरा गर्न ताकेता गर्दै आएको थियो । केही दिनअघि गाउँपालिकाले केन्द्र सरकारबाट रद्द गरी प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेको थियो । प्रदेशको सूचीमा परे पनि तत्काल सडक सुचारु राख्न गाउँपालिकाले नै लगानी गर्न लागेको दुलालले बताए ।
शैलुङका १०, मेलुङका ५ वडा तथा रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकाका ३ वडाले यही सडक प्रयोग गर्छन् । शैलुङको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको सडक नबन्दा गाउँपालिकाका अन्य वडामा पुग्ने सडक अर्थहिन बन्दै गएको छ ।
‘हामीले गाउँपालिकाको बजेटबाट प्रत्येक वडामा पुग्न करिब ७ मिटर चौडा तथा ५० किलोमिटर दूरीको सडक बनाएका छौं तर मुख्य मार्ग नै नबन्दा यसको अर्थ भएन,’ दुलालले भने, ‘सडक नबन्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण महँगो बनेको छ ।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काम नगर्ने ठेकेदार पक्राउ गरी जेल हाल्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थिए । यस्तो निर्णयलगत्तै सडक डिभिजनले कारबाही स्वरूप ठेक्का तोडेको हो ।
२०७१ साल असार ३० गते १० करोड ३१ लाख ४९ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँमा द कञ्चनजंघा लामा विल्डर्स जेभीसँग ठेक्का भएको थियो । २०७२ असार मसान्तसम्म पूरा गर्ने गरी सम्झौता भए पनि थप भएको २ वर्षसम्म २६ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । ठेकेदारले समयमा काम नगरेपछि २०७३ आसारभित्र पूरा गर्ने गरी म्याद थपिएको थियो ।